Kooxda Gunners ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka kooxda Celtic Ku Sung-Yeung oo loo yaqaano Gerrard-ka reer Korea, ka dib markii ay la dhaceen qaab ciyaareedkiisa ciyaaraha Olimbikada. (Daily Mail)
Lakiin u dhaqaaqistii Arsenal ee ciyaaryahanka kooxda Real Madrid Nuri Sahin ayaa u muuqata mid dhimatay, ilaa iyo marka laga reebo hadii Alex Song uu kooxda ka tago xagaagan. (Daily Mirror)
Ciyaaryahankii Chelsea diirada u saarnaa xagaagan oo dhan Hulk, ayaa haatan waxaa ay lagu soo dalbaday 40 milyan euro oo uu la socdo Bruno Alves, iyadoo dalabkaas uu ka yimid kooxda Ruushka ee Zenit St Petersburg (Daily Mirror)
Kooxda Chelsea ayaa u soo bandhigi doonta Marseille ciyaaryahan Gael Kakuta si ay ugu soo bedeshaan daafaca midig Cesar Azpilicueta (Daily Mail)
Ciyaaryahanka saaran suuqa xorta ah ee Nigel Reo-Coker ayaa seddex dalab oo uu ka helay kooxo ka dhisan Serie A uu iska diiday, si uu fursad u siiyo inuu u dhaqaaqo kooxda Fulham(Daily Mirror)
Ciyaaryahanka diirada u saaran kooxda Liverpool Juman Vargas ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo Fiorentina. “Waxaan rajeynayaa inaan sii joogo Fiorentina” ayuu yiri 28 jirkaas, “Ma aqaano waxa dhici doona” ayuuna hadalkiisa raaciyay. (The Sun)
Xiddiga kooxda Liverpool Luis Suarez oo qandaraaska loo kordhiyay ayaa sidoo kale loo seddex jibaaray mushaharkii uu qaadan jiray ee 40 kun ginni, isagoo haatan Reds ka qaadan doona 120 kun ginni. (Daily Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Anderlecht midfielder Cheikhou Kouyate, kaasoo ciyaaraha Olimbikada u ciyaarayay Senegal ayaa waxa uu diirada u saaran yahay Manchester City iyo Arsenal. (The Sun)
Tababaraha Manchester City ayaa si lama filaan ah 8 milyan ginni ugu dalbaday ciyaaryahanka kooxda Swansea Soctt Sinclair, lakiin hadii kooxda reer Wales ay diyaar u tahay inay iska iibiso, tababarihiisii hore Brendan Rodgers ayaa isku dayi doona inuu ka afduubto.(Daily Mirror)
Wadahadaladii u dhaxeeyay Tottenham iyo Real Madrid ayaa weli sii socda. Spurs ayaa dooneysa 40 milyan ginni, halka Real Madrid ay dalabkeeda kor u qaadan ilaa 30 milyan ginni.(Daily Mirror)
Tababaraha kooxda Wigan ayaa doonaya inuu la soo wareego ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Stoke City Jermaine Pennant, isagoo isku diyaarinaya nolol uu ka maqan yahay ciyaaryahanka diirada u saaran Chelsea Victor Moses. (The Sun)
Madaxweyne ku xigeenka AC Milan Adriano Galliani ayaa kulan qado ah shalay la sheegay madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez, waxaana ay ka wadahadaleen heshiiska macquulka ah ee uu Kaka dib ugu soo laaban karo San Siro. (La Gazzetta dello Sport)
Milkiilaha kooxda Inter Massimo Moratti ayaa diirada saaraya inuu kooxda ku soo kordhiyo ciyaaryahano cusub, waxaana uu doonayaa ciyaaryahanka reer Brazil Paulinho iyo ciyaaryahanka kooxda Bologna Gaston Ramirez. (La Gazzetta dello Sport)
Inter Milan ayaa sidoo kale dooneysa xiddiga reer Holland ee kooxda Manchester City Nigel de Jong. (Corriere dello Sport)
Wakiilka ciyaaryahanka reer Bosnia iyo kooxda Manchester City Eden Dzeko ayaa sheegay inuu ciyaaryahanka u soo kaxeyn doono Serie A, iyadoo ay wada doonayaan AC Milan iyo Juventus. (Tuttosport)
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa u soo bandhigtay koxoda Inter Milan ciyaaryahankooda Nene. (Tuttosport)
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo xagaagan weeraryahanka kooxda Athletic Bilbao, iyadoo ciyaaryahanka uu hakad geliyay wadahadalo lagu doonayay inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda reer Spain (Football Italia)
Ciyaaryahankii hore ee amaahda ku joogay Roma Simon Kjaer ayaa iska indho tiri doona dalabyada uga imaanaya Italy isagoo doonaya inuu ku biiro Manchester City. (Football Italia)
Milan ayaa xiiseyneysa daafaca kooxda Schalke Kyriakos Papadopoulos lakiin waxa ay tartan adag kala kulmayaan Real Madrid iyo Anzhi Makhachkala. (Football Italia)
Real Madrid iyo Milan ayaa weli wada xaajoodkooda Kaka siiw ada. Milan ayaa dooneysa inuu ciyaaryahankoodii hore ugu soo laabto si amaah ah, halka Real Madrid ay dooneyso inay ka soo kabsato lacagtii badneyd ee ka gashay ciyaaryahanka. (Marca)
Liverpoool ayaa ku wargelisay Barcelona inay heli doonaan Daniel Agger hadii ay la yimaadaan dalab 27 milyan euro ah. (AS)
Barca ayaa heshay heshiis shaqsiyadeed oo ay la gaari karaan Alex Song. Haatan waa inay heshiis ka dhameeyaan Gunners hadii ay doonayaan inay la saxiixdaan ciyaaryahanka khadka dhexe. (Mundo Deportivo)
Ciyaaryahan kale oo ka tagaya kooxda Malaga waa daafaca Joris Mathijsen kaasoo dalab ka helay kooxda reer Holland Feyenoord. (AS)
Weeraryahanka kooxda Athletic Bilabo Fernando Llorente ayaa u sheegay kooxdiisa inuu doonayo inuu ka tago, iyadoo Juventus iyo Tottenham ay noqon karaan meesha uu caga dhigan doono. (ETB)
Levante ayaa wadahadalo kula jirta weeraryahanka Greek Theofanis Gekas, kaasoo haatan saaran suuqa xorta. (AS)